‘नर्स बन्ने धोको थियो बनेँ जनप्रतिनिधि’ : शान्ता मुखिया | स्थानीय तह | साझामन्च
‘नर्स बन्ने धोको थियो बनेँ जनप्रतिनिधि’ : शान्ता मुखिया
प्रकाशित मिति : २०७४ ,आश्विन , १८ 12:06:17
कमल गाउँपालिका वडानम्बर ३ का महिला वडा सदस्य
असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा कमल गाउँपालिका वडानम्बर ३ बाट महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएकी शान्ता मुखिया (गुरुआमा) हिजोआज निकै ब्यस्त हुन थालेकी छन् ।
बिहान छिट्टै उठ्ने, घरको काम सक्ने र जनताको काममा निस्कनु पर्ने भएकोले पनि ब्यस्त हुनु परेको हो । हुन त योभन्दा पहिले पनि उनी ब्यस्त महिला नै हुन् । महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाको जागिर, नारी एकता मञ्चको सदस्य, समावेशी महिला शसक्तिकरण तोपगाछीको सदस्य, नवोदय बहुउद्दश्यीय सहकारी संस्थाको सञ्चालक सदस्यलगायत एक दर्जन बढी संस्थामा अवद्ध शान्तालाई घरमा बस्ने फुर्सद त कहाँ हुन्थ्यो र ! तै पनि जिम्मेवारी भने हिजोकोभन्दा आज फरक भएकै कारणले पनि उनले ब्यस्त हुनुपरेको हो ।
बुबा दिलबहादुर र आमा धनमाया गुरुङको सन्तान भई विसं. २०१४ सालमा इलामको गोलाखर्कमा जन्मिएकी शान्ता मुखियाले ६० वर्षे जीवनमा धेरै उतार चडाव भोगेकी छन् । इलाममा ९ कक्षा पास गरेपछि औपचारिक शिक्षासँगै अनमी बन्ने सपना बोकेर काठमाडौ हानिएकी शान्ताले न त अनमी नै बन्ने मौका पाइन् न त औपचारिक शिक्षा पूरा गर्न सकिन् ।
काठमाडौ पुगेर औपचारिक शिक्षाका लागि दरबार हाइस्कूलमा भर्ना लिइन् भने अनमीका लागि वीर अस्पतालमा । दुवै शिक्षालाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै थिइन्, दशैंमा घर आउँदा दिदीको मृत्यु भएको दुई दिन भइसकेको रहेछ । ‘यस्तो अप्रत्यासित घटना पछि बुबाआमाले अब पढ्नु पर्दैन भनेर काठमाडांै जानै दिनुभएन, आफ्नो पढाई पूरा गर्ने सपना अधुरै रह्यो’ शान्ताले शिक्षा पूरा हुन नसक्नुको वास्तविकता खोतलिन् ।
अर्को वर्ष मासिक ४०० रुपैयाँ तलब पाउने गरी इलाममै पढाउन थालेकी उनको त्यही स्कूलमा विज्ञान र गणित पढाउन दार्जीलिङबाट आएका शिक्षक गंगा मुखियासँग मायाप्रिती बस्यो रे ! ‘हाम्रो प्रेम सम्बन्ध र विवाहसम्मको प्रस्तावलाई परिवारले स्वीकार गरेन र हामी राति नै भागेर दमक आमचोकमा आयौं । त्यहाँ हामीलाई बलभद्र अधिकारीले सहयोग गर्नुभयो । उहाँले नै छिमेकीको छोराको ब्रतवन्ध गरेका ठाउँमा लगेर हाम्रो पनि विवाह गरिदिनु भयो’ एकै श्वासमा शान्ताले विवाहसम्मको नालीबेली सुनाइन् ।
बलभद्र सरको प्रेरणा र शिक्षाले कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुन पाइयो । त्यस पछि २०३३ सालमा केर्खामा बसाईं सरेर आयौं । बाक्लो जंगलका बीचमा जस्तै स्थापना गरिएको शहीद धर्मभक्त स्कूलको हेडसर भएर श्रीमानले काम गर्न थाल्नु भयो, म चाहिँ घर ब्यवहारमा व्यस्त भएँ । सो स्कूल उतिबेला रुखका सेउलाले छाएको थियो । बस्ती पनि पातलो, विद्यार्थी पनि थोरैमात्र आउँथे ।
‘जसोतसो जिन्दगीको गाडी अगाडि बढ्दै थियो । २०६३ साल भदौमा श्रीमानको देहावसान भयो । त्यसपछि झनै समस्या थपिए । ती सबै चुनौतीलाई पार लगाउँदै अघि बढ्दै आज यहाँसम्म आइपुगेकी छु’ शान्ता गुरुआमाले आफ्नो जीवनका आरोह अवरोहलाई सार्वजनिक गर्न चुकाइनन् ।
नेकपा एमालेको सदस्य भएकाले पार्टीले अहिले गहकिलो जिम्मेवारीसहितको अवसर दिएको छ । कमल गाउँपालिका वडा नम्बर ३ बाट महिला वडासदस्यमा निर्वाचित भए पछिको उनको दैनिकी फेरिएको हो । आफूले स्वास्थ्य स्वयम्सेविका भएर जनताको पनि सेवा गरेका कारण छरछिमेकी सबैको साथ पाएर आज जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको उनको बुझाई छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका भएर गाउँगाउँमा पुग्दा उनले बटुलेका अनुभव धेरै छन् । धेरै महिलाहरु आज पनि शिक्षाबाट बञ्चित छन् । प्रजनन् स्वस्थ्य सम्बन्धी ज्ञानको कमी छ । आफ्नै दिदीको सुत्केरी पछि सालनाल नझरेर अकालमै मृत्यु भएको घटनाले अझै पनि उनलाई झस्क्याई रहने गरेको स्मरण गर्दै शान्ताले भनिन्, ‘अब आफू निर्वाचित जनप्रतिनिधि भइसकेकोले आफ्नो वडाका महिलाहरुले त्यस्तो अकाल मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर कार्ययोजना अघि सार्नेछु ।’
अहिले शान्ता गुरुआमाको परिचय फेरिएको छ । हिजो गाउँगाउँमा दबाई बाँड्दै हिंड्ने स्वयम्सेविका दिदी भनेर चिन्नेहरु आज उनलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा चिन्छन् । भन्छिन्, ‘अस्तिसम्म केही व्यक्तिका लागिमात्र सिमित थिएँ, अब पूरै वडाको प्रतिनिधि भएकी छु । संघ–संस्थाले बोलाउँछन्, बधाई दिन्छन् र सम्मान गरिरहेका छन् । रमाइलो अनुभव भइरहेको छ, धन सम्पतीभन्दा ठूलो यही अत्मसन्तुष्टी रहेछ ।’
‘आफूलाई नर्स भएर बिरामीको सेवा गर्ने खुब मन थियो तर के गर्नु भाग्यमा रहेनछ ! अब जनप्रतिनिधि भएरै जनसेवा गर्छु’ उनले समयले दिएको जिम्मेवारीलाई गम्भीर भएर सम्बोधन गर्छु पनि भन्न छुटाइनन् । हरेक बिहान छिट्टै उठेर गाई दुहुने, घरको आन्तरिक काम सकेर जनताको काममा जान हतारिनु पर्ने दैनिकी बनेको छ उनको अहिले ।
प्रस्तुतिः उमानाथ भण्डारी